Warbixin: Fadeexaddii Trump iyo Putin oo arrin xasaasi ah ay kusoo korortay - Caasimada Online
Home Dunida Warbixin: Fadeexaddii Trump iyo Putin oo arrin xasaasi ah ay kusoo korortay
Warbixin: Fadeexaddii Trump iyo Putin oo arrin xasaasi ah ay kusoo korortay
Washington DC (Caasimada Online) – Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions wuxuu laba goor la kulmay safiirka Ruushka, ka hor doorashadii Mareyknak ee Trump uu ku guuleystay, dowladda ayaa sidaas xaqiijisay.
Markale ayuu hadalkaasi ku celiyay arbacadii, wuxuuna sheegay “inuusan weligii la kulmin saraakiisha Ruushka, uusanna kala hadlin arrimo ololaha la xiriira”.
Xubno ka mid ah xisbiga Dimuquraadiga ayaa ku eedeeyay inuu “ka been sheegay dhaarta” waxayna dalbanayaan inuu iscasilo.
Sidoo kale waxay ka dalbanayaan inuusan faraha la galin baaritaan ay wadaan FBI-da Mareykanka, taasi oo uu xalay aqbalay.
Arrinta ku saabsan in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka iyo in kale ayaa noqotay su’aal waydiinteeda ka dhamaan wayday madaxweyne Donald Trump.
Balse su’aasha ugu muhiimsan ee ay tahay in laga jawaabo aya waxay tahay, ilaa xad intee buu ololaha Trump ka war hayey waxa uu sameynayey madaxweynaha Ruushka iyo dowladiisa?